မြန်မာနှင့် ကိုးရီးယား အနုပညာရှင်များ ပူးပေါင်းရိုက်ကူးထားတဲ့ “တန်ဖိုး“ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး.... - Zeekwat Hot News
မြန်မာနှင့် ကိုးရီးယား အနုပညာရှင်များ ပူးပေါင်းရိုက်ကူးထားတဲ့ “တန်ဖိုး“ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး….
September 5, 2019045
မြန်​မာ နှင့်​ ကိုရီးယားအနုပညာရှင်​များပူ​ပေါင်းရိုက်​ကူးထားတဲ့ “တန်​ဖိုး”ရုပ်​ရှင်​ဇာတ်​ကားကြီး Red Carpet Show စက်​တင်​ဘာလ(၄)ရက်​​နေ့ ည ၆နာရီမှ ၈ နာရီအထိ JCGV, Junction city, Yangon တွင်​ကျင်းပပြုလုပ်​ခဲ့ပါတယ်​။
ထိုဇာတ်​ကားမှာဆိုရင်​ ပရိတ်​သတ်​ချစ်​တဲ့အနုပညာရှင်​များဖြစ်​တဲ့ – ရန်​​အောင်​ ၊ ဇင်​ဝို်​င်း ၊ ထွန်းထွန်း ၊ မို့မို့မြင့်​​အောင်​ ၊ ​အေးမြတ်​သူ ၊ ခင်​ဇာခြည်​​ကျော်​ ၊ ​မောနီကာပန်​ နှင့်​ သရုပ်​​ဆောင်​ များစွာပါဝင်​ သရုပ်​​ဆောင်​ထားကျပါတယ်​။
ဇာတ်​ကား​လေးရဲ့ နာမည်​က “တန်​ဖိုး”ဆိုတဲ့အတိုင်း တန်​ဖိုးရှိ​စေတဲ့အရာ​တွေက ဘာ​တွေများဖြစ်​မလဲ…? ​နောက်​ဒီဇာတ်​ကားကို ကြည့်​ချင်းအားဖြင့်​ ဘယ်​လိုရသ​တွေရမလဲ…? ​နောက်​ပြီးဒီဇာတ်​ကားကိုကြည့်​ပြီး​တော့ ဘယ်​ခံစားမှုမျိုးခံစားရမလဲဆိုတာသိချင်​ရင်​​တော့ ဒီဇာတ်​ကားကြီးကို သွား​ရောက်​ကြည့်​ဖို့ ​ပြောပာရ​စေ​နော်​။
ဒီဇာတ်​ကားရဲ့ထူးခြားမှု​နောက်​တစ်​ခုက မြန်​မာနိုင်​ငံက အနုပညာရှင်​တင်​မကပဲ ကိုရီးယား နိုင်​ငံက အနုပညာရှင်​များပါ ပူး​ပေါင်းရိုက်​ကူးထားတဲ့ ရုပ်​ရှင်​ဇာတ်​ကား​ကောင်းကြီး တစ်​ကားဖြစ်​ပါတယ်​။
“တန်ဖိုး“ ရုပ်ရှင်ကားကို လာမည့် စက်တင်ဘာလ (၁၂) ရက်မှာ မြန်မာတနိုင်ငံလုံးရှိ ရုပ်ရှင်ရုံများတွင် တပြိုင်တည်းပြသသွားမည် ဖြစ်ပါတယ်။
Source : https://www.facebook.com/tanphoeofficial/
မင်ျဂလာ ZeeKwat ပရိတျသတျကွီးရေ….
မွနျမာ နှငျ့ ကိုရီးယားအနုပညာရှငျမြားပူပေါငျးရိုကျကူးထားတဲ့ “တနျဖိုး”ရုပျရှငျဇာတျကားကွီး Red Carpet Show စကျတငျဘာလ(၄)ရကျနေ့ ည ၆နာရီမှ ၈ နာရီအထိ JCGV, Junction city, Yangon တှငျကငျြးပပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။
ထိုဇာတျကားမှာဆိုရငျ ပရိတျသတျခဈြတဲ့အနုပညာရှငျမြားဖွဈတဲ့ – ရနျအောငျ ၊ ဇငျဝိုငျး ၊ ထှနျးထှနျး ၊ မို့မို့မွငျ့အောငျ ၊ အေးမွတျသူ ၊ ခငျဇာခွညျကြျော ၊ မောနီကာပနျ နှငျ့ သရုပျဆောငျ မြားစှာပါဝငျ သရုပျဆောငျထားကပြါတယျ။
ဇာတျကားလေးရဲ့ နာမညျက “တနျဖိုး”ဆိုတဲ့အတိုငျး တနျဖိုးရှိစတေဲ့အရာတှကေ ဘာတှမြေားဖွဈမလဲ…? နောကျဒီဇာတျကားကို ကွညျ့ခငျြးအားဖွငျ့ ဘယျလိုရသတှရေမလဲ…? နောကျပွီးဒီဇာတျကားကိုကွညျ့ပွီးတော့ ဘယျခံစားမှုမြိုးခံစားရမလဲဆိုတာသိခငျြရငျတော့ ဒီဇာတျကားကွီးကို သှားရောကျကွညျ့ဖို့ ပွောပာရစနေျော။
ဒီဇာတျကားရဲ့ထူးခွားမှုနောကျတဈခုက မွနျမာနိုငျငံက အနုပညာရှငျတငျမကပဲ ကိုရီးယား နိုငျငံက အနုပညာရှငျမြားပါ ပူးပေါငျးရိုကျကူးထားတဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကားကောငျးကွီး တဈကားဖွဈပါတယျ။
“တနျဖိုး“ ရုပျရှငျကားကို လာမညျ့ စကျတငျဘာလ (၁၂) ရကျမှာ မွနျမာတနိုငျငံလုံးရှိ ရုပျရှငျရုံမြားတှငျ တပွိုငျတညျးပွသသှားမညျ ဖွဈပါတယျ။
အင်အားပြင်း ဟာရီကိန်းလေမုန်တိုင်း U.S. အရှေ့တောင်ပိုင်းကို ၀င်ရောက်နိုင်ခြင်းနဲ့ ဒေသခံပြည်သူများ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်